Lasitra - Mestech Industrial Limited
Ny bobongolo (bobongolo) ary ny maty dia fitaovana hanamboarana ny banga na akora ho lasa ampahany manana endrika sy habe manokana eo ambanin'ny fihetsiky ny hery ivelany. Ity fitaovana ity dia misy ampahany samihafa, ary ny bobongolo isan-karazany dia misy faritra samihafa. Ny fanodinana izay manova indrindra ny toetoetran'ny fitaovana mba hahatratrarana ny endrik'ilay zavatra. Ny bobongolo sy ny maty dia fitaovana amin'ny famokarana betsaka. Ny fampiharana ny bobongolo dia manatsara be ny fahombiazan'ny famokarana sy ny famokarana miverimberina amin'ny ampahany. Izy io dia fantatra amin'ny anarana hoe "renin'ny indostria".
Ny bobongolo sy ny maty dia azo zaraina ho sokajy roa arakaraka ny toetrany fanodinana
1. Maty: ny fampiharana ny endrika amorom-baravarana dia afaka manao ny fisarahana tsy misy banga (banga) arakaraka ny endrika endriny, na ny famolavolana ny famolavolana extrusion. Ity karazana maty ity dia ampiasaina amin'ny fanosehana, famonoana maty, lohateny mangatsiaka ary fantsom-pitetezana ampahany.
2. bobongolo: ny kôlôida na ny ranoka dia atsofoka ao anaty lavaka famolavolana, na akora matevina no atsonika ao anaty lavaka famolavolana, fenoina sy mangatsiatsiaka hahazoana vokatra misy endrika mitovy amin'ny lava-borosy. Ity karazana bobongolo ity dia ampiasaina amin'ny famolavolana tsindrona ampahany amin'ny plastika, famolavolana gel silika, fanariana vy maty. Amin'ny ankapobeny tsy fahazarana dia manasokajy ny maty ho an'ny metaly tsy ferrous toa ny firaka aliminioma sy ny firaka zinc isika rehefa maty
Lasitra tsindrona ho an'ny faritra fiara
Bobongolo tsindrona HASCO
Araka ny fitaovan'ny vokatra novokarina tamin'ny alàlan'ny bobongolo, ny bobongolo dia mizara ho:
bobongolo vy, bobongolo plastika ary bobongolo manokana.
1. Lasitra metaly: ao anatin'izany ny fametahana haingo (toy ny fanosehana faty, famonoana faty, famonoana olona , sns), extrusion maty, maty manary maty, forging die, sns;
Ny bobongolo 2.Nonmetaly dia mizara ho: bobongolo plastika, bobongolo tsy metaly tsy metaly, bobongolo fasika, bobongolo ary lasitra parafin. Anisan'izany, miaraka amin'ny fampandrosoana haingana ny plastika polimerika, ny lasitra plastika dia mifandray akaiky amin'ny fiainan'ny olona. Ny lasitra plastika dia azo zaraina amin'ny ankapobeny: bobongolo bobongolo fanindronana, bobongolo vita amin'ny extrusion, bobongolo ampiana entona entona sns
Ny bobongolo sy ny maty dia manana endrika contour na lava-kazo manokana, ary ny banga dia azo sarahina (manosotra) arakaraka ny endrik'ilay endriny amin'ny alàlan'ny fampiasana ny endriny contour misy sisiny. Amin'ny alàlan'ny fampiasana ny endrik'ilay lavaka anatiny, ny banga dia afaka mahazo ny endrika telo-habe mifanentana aminy. Amin'ny ankapobeny ny die dia misy fizarana roa: maty mihetsika sy maty raikitra (na totohondry sy maty), izay azo sarahina sy hakatona. Ny ampahany dia avoaka rehefa misaraka izy ireo, ary ny banga dia atsindrona ao anaty lavaka maty ho an'ny fiforonany rehefa akatona.
Misy dingana telo amin'ny famokarana bobongolo: endrika 1.Mold; 2.manodina; 3. fanekena ny bobongolo
Mestech dia manome ny mpanjifa ny famolavolana ny faritra plastika sy ny vy, ny fanamboarana lasitra fanindronana, ny bobongolo ary ny bobongolo. Ary ny fampiasana lasitra ho an'ny famokarana betsaka ny faritra plastika, ny vy. Manantena ny hiara-miasa aminao izahay hanomezana anao ny famokarana bobongolo sy ny plastika, ny famokarana sy ny serivisy amin'ny vy.